China Abicah ngerabha Cushion Abavelisi bashushu beendaba kunye nabathengisi | UCayce ngoMeyi
Abicah irabha yomqamelo oshicilelweyo oshushu uyilelwe kwaye wenziwa yinkampani yethu ezinikele ekuxhaseni umatshini oshushu ngokwemfuno yeemarike, ezisetyenziswa kakhulu kumatshini wokucinezela ucofe i-laminate flooring, i-particleboard, iplywood, iingcango, ifanitshala kunye nezinye izihlandlo.
Xa indibaniselwano yokusebenza cofa eshushu, abicah irabha umqamelo ibekwe phakathi ipleyiti eshushu kunye template, vumela uxinzelelo yokusebenza kunye nobushushu ipleyiti eshushu adlulise ngokulinganayo, ngoko ke ngokwenene kunye zeendawana ngokungqinelanayo banamathele ngokusondeleleneyo ngakumbi, ukuze inokubuphucula umgangatho kunye nomgangatho wangaphakathi wemveliso, inokuhlawula iimpazamo zeplate ukukhusela itemplate kumonakalo.
Ulwakhiwo lomtya werabha we-silicone oshushu oshushu yi-silicone-sikhokelo-se-silicone, ubukhulu yi-1.5-2.5mm, ubushushu bobushushu i-250 ens, ukuqina okuphezulu kunye namandla okukrazula, akukho deformation, ukufana kokuqina, ubomi obude benkonzo.
Inombolo yomzekelo Ukophula amandla amandla okuncamathela Ukuqina (Unxweme A) Ukophula ulwandiso% umbala
MPHA Hayi / mm
KXM2321 80 2.5 55 ± 5 350 bomvu
Ukusetyenziswa kwemveliso: Isetyenziselwa ukucofa, esetyenziselwa ifenitshala, iingcango zomthi zocinezelo.
Iimpawu zemveliso: amandla aphezulu aqine kunye namandla okukrazula, nkqu ubukhulu, ubomi obude benkonzo, ubushushu obunganyangeki ukuya kuthi ga kuma-250.
Ukucaciswa kwemveliso: 1) ubukhulu: 1.5-2.5mm 2) ububanzi obukhulu: 3800mm ngaphandle kwendibaniselwano 3) nabuphi na ubude 4) umbala: bomvu
Egqithileyo Iphepha leRabha leSilicone leLaminator yeSola
Okulandelayo: Abicah irabha Cushion yokwenza iLaminator yeKhadi
Pcb ngerabha Cushion ndizayo For Hot Press Umatshini
Iphepha leRabha leSilicone lokuCofa ukuCoca